फेरि बढयो सरकारी कर्मचारीको तलब : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पनि वृ द्धि, कति पुग्यो ? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/फेरि बढयो सरकारी कर्मचारीको तलब : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पनि वृ द्धि, कति पुग्यो ?
फेरि बढयो सरकारी कर्मचारीको तलब : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पनि वृ द्धि, कति पुग्यो ?
सरकारी निकायतर्फ निजामति कर्मचारीको औसत तलब सूचांक अघिल्लो आवमा ३९३.१४ थियो । गत आवको सोही अवधिमा १३.४५ प्रतिशतले बढेर ४४६.०४ पुगेको छ ।निजामति कर्मचारीमा अधिकृति तहका कर्मचारीको औसत तलब सूचांक अघिल्लो आवमा ३५८.८३ थियो । जुन गत आवको सोही अवधिमा १७.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४२१.४५ पुगेको छ ।
ट्रकको ठक्करबाट एक युवतीको मृ त्यु पछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरु`द्ध